Taariikhda Emailka iyo Naqshadeynta Emailka | Martech Zone
44 sano kahor, Raymond Tomlinson wuxuu ka shaqeynayey ARPANET (horudhaca Dowladda Mareykanka ee Internet-ka oo si guud loo heli karo), waxayna ikhtiraacday emayl. Waxay ahayd heshiis aad u weyn maxaa yeelay illaa xilligaas, farriimaha ayaa la diri karaa oo keliya ayaa laga akhrin karaa isla kombiyuutarka. Tani waxay u oggolaatay isticmaale iyo meel ay ku kala tageen calaamadda & sumaddu. Markii uu tusay saaxiibkiis Jerry Burchfiel, jawaabtu waxay ahayd:
Cidna ha u sheegin! Tani maahan waxa aan u maleyneynay inaan ku shaqeyneyno.
E-maylkii ugu horreeyay ee Ray Tomlinson loo diro wuxuu ahaa emayl tijaabo ah Tomlinson oo lagu tilmaamay mid aan qiimo lahayn, wax la mid ah "QWERTYUIOP". Hore u sii soco maanta oo waxaa jira in ka badan 4 bilyan oo koonto email ah oo 23% ka mid ah ay u heellan yihiin ganacsiyada. Waxaa lagu qiyaasaa in ay jiri doonaan ku dhowaad 200 bilyan oo emayl oo la soo diro sannadkan oo keliya iyada oo koritaanka sii socda ee 3-5% sannad kasta sida laga soo xigtay Kooxda Radicati.
Taariikhda Isbedelada Naqshadeynta Emailka
Email Suubban ayaa isku dubariday fiidiyowgan weyn waxa ku saabsan astaamaha iyo taageerada qaabeynta ee lagu daray emaylka sanadihii la soo dhaafay.
Rabitaankeyga kaliya ee emaylku waa in macaamiisha sida Microsoft Outlook ay kor ugu qaadi lahaayeen taageeradooda HTML5, CSS iyo fiidiyow si aan iskaga takhalusno dhammaan dhibaatooyinka ka jira helitaanka emayllada si ay u muuqdaan kuwo wanaagsan, sifiican u ciyaaraya, oo ku habboon dhammaan cabbirka shaashadda. Taasi waa wax aad u badan oo la isweydiin karo?
Tags: phishing-kaAOLbarack obamakaraa-spamdkimDMARCemailemailtaariikhda emailkaEmail MarketingftcGmailGmail tabstaariikhda emaylkahotmailLOLaragtida microsoftMMSKuuriyada waqooyiOdoroskaphishinggaadhistaSonyspamsharciyada spamCiidanka Booliiska SoomaaliyeedSimpsons-kawaxaad heysataa boostada
Iyo xitaa kadib sanadahan oo dhan, wali waxaa jira meel suuq geynta emaylka